Momba anay - Dingxing Hardware Electromechanical Equipment Co., Ltd.
Suzhou Dingxing Hardware Electromekanika Fitaovana Co., Ltd.
Speed ​​Leopard dia orinasa mpanamboatra fitaovana matihanina CNC any Shina. Ny orinasa dia naorina tamin'ny taona 1999. Ny tanjontsika sy ny lalànantsika dia ny tsy fivadihana, ny fanavaozana, ny fandresena rehetra. Nanolo-tena izahay hampivelatra ny famolavolana ny fitaovana fanapahana CNC hatrany. Ankehitriny ny teknolojianay dia nivoatra hatramin'ny ambaratonga avo kokoa. Miaraka amin'ny toe-tsaina mpisava lalana, famokarana miampy sanda ambony ary serivisy tena tsara, Speed ​​Leopard dia nanitatra soa aman-tsara ny sehatry ny asa. Betsaka ny birao any amin'ny tanàna afovoany am-polony manerana ny firenena, misy injenieran'ny varotra maherin'ny 50. Manaraka ny fitsipika ifotoran'ny olona ny orinasa. Diniho ny fambolena talenta. Mandany vola be amin'ny fampiofanana manokana isan-taona izahay. Ny fitaovana fanapahana Speed ​​Leopard CNC dia ny famokarana, ny fahombiazana ary ny tombom-barotra. Manatsara ny tombom-barotra ho an'ny mpanjifa izahay. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny CNC End Mill, ny fampidirana Tuning ho an'ny Lathe Tuning Tool, ny milina kofehy ary ny fikikisana ny mpihazona Fit End Mill.
Vokatra avo lenta sy serivisy tena tsara, mahazoa ny tiako indrindra amin'ny mpanjifa. Misy trano fanatobiana entana lehibe ao amin'ny Distrikan'ny Hi-Tech Nasionaly Suzhou. Ny tahiry ampy dia afaka manampy ny mpanjifa hampihena ny tsindry volan'ny lisitra. Tehirizo ny vidiny sy ny fotoana fandefasana azy. Avelao hisalasala ny mpanjifa.
Satria mifantoka, matihanina tokoa. Satria matihanina, tena tsara. Manantena ny hiara-miasa aminao!
Any amin'ny distrika teknolojia avo lenta any Suzhou no misy ilay orinasa. Sahabo ho 3000 m² ny velarantanin'ny fananganana orinasa mahazatra. Ny orinasa dia manana departemanta 6 sy mpiasa 60. Misy am-polony maro ny fitaovana fanodinana sy fanandramana. Serivisy fanohanana ara-teknika tanteraka ny varotra. Ny tahiry ampy dia afaka manampy ny mpanjifa hampihena ny tsindry volan'ny lisitra. Tehirizo ny vidiny sy ny fotoana fandefasana azy.
Fahamendrehana: amin'ny fahatsoram-po, hanao izay mahitsy.
Win-Win: Fiaraha-miasa mahasoa ho an'ny ho avy tsaratsara kokoa.
Fanavaozana: Ny fanovana ihany no tsy miova.
Mandray anjara amin'ny fampiratiana ampolony eran-tany ny orinasa isan-taona. Amin'izao fotoana izao dia nanangana fiaraha-miasa azo itokisana amin'i Alemana, Portugal, Russia, India, Malaysia, Mexico sns.